Qarax Askarta Itoobiya Lagula Beegsaday Gobalka Baay. – Bogga Calamada.com
Qarax Askarta Itoobiya Lagula Beegsaday Gobalka Baay.
Qarax culus ayaa lala beegsaday kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya oo ku socdaalayay qeybo ka mid ah gobalka Baay oo dhaca dhanka Konfur Galbeed dalka Somalia.
Qaraxan waxa uu sigaar ah kaga dhacay inta u dhaxeysa Maaya Fuulka iyo deegaanka Deynuunaay ee duleedka magaalada Baydhabo,iyadoona deegaanada hoostaga magaaladaasi si aad ah looga maqlay dhawaaqa qaraxa.
Qaraxan ayaa haleelay mid ka mid ah gaadiidkii ay wateen ciidamada Kufaarta Xabashida Itoobiya kaasi oo si aad ah u burburay,sidoo kale qaraxa waxaa baqti iyo dhaawac ku noqday askartii Amxaarada ee la socotay gaarigaasi.
Dhanka magaalada Muqdisho waxaa qarax lagu weeraray Xarunta Laanta Towfiiq ee degmada Yaaqshiid,iyadoona qaraxa oo ka dhacay gudaha xarunta uu sababay khasaara soo gaartay xubnihii Murtadiinta ee ku sugnaay gudaha xaruntaasi.